musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » | » Ndege Itsva San Jose kuenda kuPalm Springs
| • Airlines • nhandare yendege • Dzvanya apa kana iri pepanhau rako!
Ndege itsva yeAlaska Airlines kubva kuMineta San José International Airport (SJC) nePalm Springs International Airport (PSP) yakatanga nhasi.
Ndege dzemazuva ese dzeAlaska Airlines dzinosimuka kuMineta San José na8:10 am, dzichisvika muPalm Springs nguva dza9:30 mangwanani, zuva rega rega. Kune avo vari muPalm Springs, ndege yemazuva ese kuenda kuSan José inosimuka na10:10 am
"Nonstop sevhisi kuPalm Springs yanga iri nzira inokumbirwa zvikuru kwemakore akati wandei," akadaro John Aitken, SJC Mutungamiriri weAviation. "Kubatana uku pakati peSilicon Valley neCoachella Valley chiratidzo chinonakidza chekupora, uye matunhu ese ari maviri achabatsirwa nebasa remazuva ese."
"Kuchengetedza sevhisi isingamire kuSan José kwave kukoshesa kuPalm Springs International Airport," akadaro Ulises Aguirre, Executive Director weAviation yeGuta rePalm Springs. "San José, pamwe nedzimwe nzvimbo dzeBay Area, inzvimbo yepamusoro yevagari nemabhizinesi muCoachella Valley uye tinotenda Alaska nekubatanidza PSP kuSJC."
Kubhururuka kwemaminetsi makumi masere kunoshanda mundege yeEmbraer 80, ine zvigaro makumi manomwe nematanhatu; 175 mubhizinesi uye 76 muhupfumi.
Kutangwa kwesevhisi kunotanga nguva yezororo rekutenda yekutenda, iyo inotanga nhasi, Mineta San José International iri kutarisira vafambi zviuru mazana mana mukupera kwesvondo rinouya. SJC inopa zvinotevera kubatsira vafambi kubvisa kushushikana paAirport mwaka uno wezororo:
New Online Parking Reservations inowanikwa pa flysanjose.com/parking
Nyowani Yevana Zoom Zone padyo neGedhi 25
New Trader Vick's Restaurant muTerminal B
Live Guitarists vari Kufamba-famba materminals kuburikidza ne11/25
Vamiriri veAirport muMaterminals kuti vape rubatsiro rwevafambi
"Iyo Lounge kuSJC" yakavhurwa
Sunflower Lanyard Program (yevafambi w yakavanzika hurema)
Avo vari kufamba munguva ino yezororo vanoyeuchidzwa kupfeka zvinovhara kumeso paAirport uye mundege. SJC inokurudzira kusvika angangoita maawa maviri pamberi penguva yekubhururuka kuti ubvumire kupaka, kutenga matikiti, uye kuongorora, uye kutarisa nendege chero shanduko yendege. Vafambi vanobva kuSJC vanogona kuronga kumberi uye kuchengetedza mari nekubhuka nzvimbo yekupaka airport online. Kuchengetera Airport Parking online uye kuona chaiyo-nguva yekupaka iripo, shanya flysanjose.com/parking.
SJC: Kushandura Mafambiro eSilicon Valley
Mineta San José International Airport (SJC) ndiyo nhandare yendege yeSilicon Valley, bhizinesi rinozvitsigira rine uye rinoshandiswa neGuta reSan Jose. Nhandare iyi, yave mugore rayo rechi71, yakashanda vafambi vangangosvika mamirioni gumi nemashanu muna 15.7, iine basa risingamire muNorth America uye kuEurope neAsia. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve airport, shanya https://www.flysanjose.com.